Izindaba - Iphrojekthi yokukhipha upelepele waseChenguang iwine i-China Industrial Award
Ukukhishwa okunomsoco namakhambi
Ubisi Thistle Khipha
Green Khofi Bean Khipha
Spice & Okubalulekile
Iphrojekthi yokukhipha i-pepper ye-Chenguang iphumelele i-China Industrial Award
NgoDisemba 27, iChina Federation yezomnotho wezimboni yabamba Ingqungquthela Yesithupha Yemiklomelo Yezimboni eChina eBeijing. Amabhizinisi namaphrojekthi angama-93 athola imiklomelo yeChina Industrial, imiklomelo yokuncoma kanye nemiklomelo yokuqokwa ngokulandelana. Iqembu le-Chenguang biotechnology's "ubuchwepheshe bokukhishwa kwe-Pepper nemishini yokuqamba kabusha kanye nephrojekthi yezimboni" liwine umklomelo wokuncoma.
Imikhiqizo ekhishwa yiCapsicum ikakhulukazi i-capsanthin ne-capsaicin, esetshenziswa kakhulu ekudleni, emithini nakweminye imikhakha, futhi iyizidingo zempilo yesimanje. Ngawo-1950, i-United States yahola ekukhipheni iCapsanthin kupelepele, yahola umkhakha wemboni. Kamuva, le mboni yabuswa yi-United States, iSpain neNdiya. I-China yangena kuphela embonini yokukhipha upelepele ngawo-1980, ngokuqala sekwephuzile, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuya emuva kanye nokukhipha okunganele. Yize kuyizwe elikhulu elinemithombo kapelepele, imikhiqizo yalo idinga ukungeniswa ivela phesheya.
I-Chenguang biology yangena embonini yokukhipha upelepele ngonyaka ka-2000. Isinqobe ubuchwepheshe obuningi bokucubungula, njengokucubungula upelepele ngesibambo, ukudidiyelwa okuqhubekayo kwe-countercurrent gradient extraction, izigaba eziningi ezihlukanisayo ezihlukanisayo, futhi yakha isizinda sokuqala sikapelepele esikhulu ulayini wokukhiqiza eChina. Amandla ayo okukhiqiza athuthukiswe kakhulu. Ngokuthuthuka okuqhubekayo nokwenziwa kwezinto ezintsha, njengamanje, ulayini owodwa wokukhiqiza ucubungula amathani ayi-1100 wezinto zokusetshenziswa ngosuku, izikhathi eziphindwe kaningi ukwedlula ezedlule ukukhiqizwa kwamandla okugcwele izinsuku eziyi-100 kungahlangabezana nesidingo somhlaba jikelele. ICapsaicin ne-capsaicin zikhishwe ngasikhathi sinye. Isivuno se-capsaicin sikhuphuke sisuka ku-35% saya ku-95% ngenkathi isivuno se-capsaicin sikhuphuke ngamaphesenti ama-4 noma ama-5 amaphuzu aya kuma-98%. Ukulahleka kwe-solvent ngethani lempahla eluhlaza kwehlisiwe kusuka ku-300 kg kuya ngaphansi kuka-3 kg ngokwenziwa okuhlanganisiwe kwenqubo yokuqhubeka kwengcindezi engemihle eqhubekayo. Ubuchwepheshe bezimboni bokuhlanzeka okuphezulu kwe-capsaicin crystal, isizinda esibucayi se-capicum red pigment, i-capsicum pigment ebomvu kanye ne-capsaicin microemulsion sakhiwe eChina.
Ucwaningo lwebhayoloji lwaseChenguang luthole imithombo yokungcola kanye nemithetho yokufuduka yokulandela umkhondo wezinto eziyingozi kupelepele nemikhiqizo yayo ekhishwe, yasungula futhi yathuthukisa ubuchwepheshe bokukhipha izinsalela zemithi yokubulala izinambuzane yaseSudan emikhiqizweni, yasungula uhlelo lokuqinisekisa ikhwalithi nokuphepha yonke inqubo yepelepele kusuka ekutshaleni, ekuvuneni, ekugcineni nasekuthumeleni kuya ekucubunguleni, futhi yakha amazinga kazwelonke wezinto zokusetshenziswa ezifanele, imikhiqizo nezindlela zokuthola. Ikhwalithi yomkhiqizo iyanelisa Hlangana nokufunwa okuphezulu kwezimakethe zomhlaba jikelele, endaweni ephambili yokuhola.
Ngesikhathi sokuqaliswa kobuchwepheshe bokukhipha upelepele nemishini yokusebenza emisha kanye nezezimboni, kwatholakala amalungelo obunikazi kazwelonke angama-38 namalungelo obunikazi amasha ama-5. Ngobuchwepheshe obuthuthukile, okokusebenza kanye nezezimboni, isabelo semakethe se-capsicum red, esikhiqizwa ngokuzimela e-China, sikhuphukile sisuka ngaphansi kuka-2% saya ngaphezu kuka-80% emakethe yomhlaba (i-Chenguang biology ifinyelela ku-60%), kanti i-capsaicin ine lenyuke lisuka ku-0.2% laya ku-50% (i-Chenguang biology i-40%), ethole i-China ilungelo lokukhuluma emakethe yamazwe omhlaba yemboni yokukhipha upelepele.
Umklomelo we-China Industrial umklomelo omkhulu kunayo yonke emkhakheni wezimboni waseChina ovunyelwe nguMkhandlu Wezwe. Kukhethwa njalo eminyakeni emibili ukusetha amabhizinisi namaphrojekthi wokulinganisa okuhle kakhulu futhi kuqhutshwe ukwakhiwa kwenani elikhulu lamabhizinisi ngokuncintisana okuyisisekelo.
Isikhathi Iposi: Jan-15-2021